Wiil 11 sano jir ah oo aan gacmo laheyn oo labista, cadeyda, dharka xirta (Daawo Video) – SBC
Wiil 11 sano jir ah oo aan gacmo laheyn oo labista, cadeyda, dharka xirta (Daawo Video)
Posted by editor on Julaay 27, 2011 Comments
Wiil yar oo 11 sano jir ah oo u dhashay wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka muuqata mucjisada & awoodaha EEBE , iyadoo wiilkaasi oo aan laheyn wax gacmo ah uu si caadi ah u noolyahay isla markaana hawlmaalmeedkiisa uu qabsanayo gaar ahaan waxbarashada, nadaafada & labiska.
Wiilkan oo lagu magacaabao Yu Tae Ho ayaa ku dhashay gacmo la’aan, waxaa kale oo uu ku leeyahay lugaha min afar farood halka dadka caadiga ah ay ku leeyihiin cagaha shan farood taasi oo ah awooda abuurta ALLE.
Tae wuxuu aadaa iskoolka wuxuuna wax la bartaa ilmo ay isku da’yihiin oo ay iyagu lixaadku u dhan yahay balse isagu gacmo la’aanta ma ahan mid ka reebtay in uu wax la qaybsado qeyrkiis, isagoo sida u adeegsada qorista casharadiisa waxbarashada farihiisa cagaha ku yaal.
Tae ayaa waxyaabaha la yaabka leh ee ILAAH u siiyey hibada ayaa waxaa ka mid ah in uu cadeydo subixii waliba iyadoon la caawineyn uu buraashka uu ku cadeyanayo uu daawada cadeyga si xirfad leh u marsanayo, sidoo kale wuxuu si caadi ah u gashadaa fanaanadaha & waliba saraawiisha.
Intaasi oo kaliya ma ahane wuxuu Tae labada suul ee cagaha & waliba faraha kale u adeegsadaa cunto cunista, waxaa la yaab leh isagoo laba qori oo yar yar oo ay cuntada ku cunaan dadka wadamada Aasiya bari uu si xirfad leh cunto ugu cunayo.
Hadaba muuqaalada hoose ka daawo filim kala duwan oo wiilkaasi laga duubay oo ku jira nolol maalmeedkiisa caadiga ah.